Maninona ianao no tokony hiaro ny tranonkalanao amin'ny SSL taratasy fanamarinana amin'ny Semalt
Mieritreritra momba ny fomba rehetra azonao hanitarana ny lanjan'ny SEO tranokalanao? Na dia azonay antoka fa tsy maintsy naka ny voankazo rehetra ambany ianao, dia misy ny singa iray izay matetika no tafita. Ary izany ny fanaovana data encryption.
Amin'ny teny hafa, ny fametrahana ny kaody SSL ao amin'ny tranonkalanao izay manentana fifandraisana azo antoka sy voaro amin'ny mpampiasa sy ny angon-dry zareo. Miaraka amin'i Semalt, azonao atao ny miantoka fa voatahiry ary azo antoka ny fifandraisana rehetra ao amin'ny tranonkalanao. Ny mari-pankasitrahana SSL azontsika atao dia ampiasaina betsaka manerana ireo tranonkala izay mahatonga azy ireo ho azo antoka kokoa, ho sariaka amin'ny Google ary malaza.
Ny fananana fampidirana HTTPS matanjaka dia mety ho fomba tsara hanalana ny haavon'ny SEO tranokalanao ho avo kokoa eo imason'ny milina fikarohana. Indrindra indrindra raha ny tranokalanao dia miresaka momba ny fandoavam-bola (ohatra: ny carte de barse).
Andao hojerentsika ny antony maha-zava-dehibe ny SSL ao amin'ny SEO amin'ny 2020 sy mihoatra.
Inona ny mari-pahaizana SSL?
Alohan'ny hahatongavantsika ny antsipirihany, andao aloha hahatakatra hoe inona ny mari-pahaizana SSL. Raha vaovao amin'ny tranokala ianao, ny fanontaniana lehibe iray dia: inona ny inona ny tranokala tranokala? Na, inona no dikan'ny HTTPS?
Tsotra ny valiny. Ny SSL, izay mijoro ho an'ny Secure Sockets Layer, dia protocol fiarovana amin'ny Internet izay manome alalana ny fitrandrahana angon-drakitra, fanamarinana ary fitambaran-dahatsoratra ao anaty tranonkala maoderina. Mamadika ny protocol famindrana hypertext tsy tapaka (HTTP) ho fiarovana (HTTPS) azo antoka, manome fiarovana amin'ny data sy ny fahatokisan'ny mpampiasa anao. Izay antontan-javatra rehetra mivoaka amin'ny mpizara tranokalan'ny tranokalan'ny tranokalan'ny tranokala dia tsy tokony hangalatra na hanakorontana mandritra ny fandefasana.
Ny SSL dia azo apetraka amin'ny tranokala iray toy ny taratasy fanamarinana (izay atambatra ny kaody) novokarin'ireo mpamatsy iray toa an'i Semalt. Ity fanamarinana SSL ity dia manao encryption ny angon-drakitra rehetra miditra sy tsy mivoaka ao amin'ny tranonkalanao. Atao amin'ny zavatra telo izany indrindra:
Encrypting ny data rehetra
Fanombohana dingana fanamarinana eo amin'ny fitaovana (solosaina sy ny mpizara) mba hanamafisana fa ireo fitaovana ireo no ambara fa izy ireo
Alaharo amin'ny sonia ireo angon-drakitra mba hahafantarana tsara kokoa amin'ny lafiny roa.
Amin'ny fiarovana amin'ny Internet, ny teny teknika ho an'ny SSL dia TLS, izay mijoro ho an'ny Security Layer Security. Izy no mpandimby ny protocol SSL 3.0 tany am-boalohany izay natsangana tamin'ny taona 1996. Ankehitriny dia fantatra kokoa amin'ny hoe encry SSL / TSL. Tian'i Google ny hiantso azy ho HTTP noho ny TLS na HTTPS fotsiny.
Ohatra, rehefa mitsidika ny tranokalanao ny mpampiasa iray ary miditra ao amin'ny mombamomba ny carte de crédit amin'ny pejin'ny Checkout dia tokony hampidirina ao anaty angon-drakitra izany. Miaraka amin'ny taratasy fanamarinana SSL, azonao atao ny manome antoka fa izany. Io dia miantoka ny fampahalalana momba ny mpampiasa ny mpitsikera ary koa manolotra ny tranokalanao ho azo atokisana. Mahatonga ireo mpampiasa anao hiverina sy mihetsika indray amin'ny fotoana manaraka.
Ity taratasy fanamarinana SSL ity ihany koa no manome famantarana mihidy maitso amin'ny fanombohan'ny URL ao amin'ny Google Chrome sy Mozilla Firefox. Hatramin'ny nanombohantsika dia nanompo mpanjifa an-jatony manerana izao tontolo izao i Semalt. Ny mpanjifanay rehetra dia miankina amin'ny iray amin'ireo drafitra fanoloran-tena SSL telo atolotray anay. Ny fonosana Premium (izay manohana ny subdomain) ihany koa dia mpivarotra lafo indrindra amin'ny fanomezana natolotry SSL / TSL.
Manampy antsika izany fa ny mpiasan'ny Semalt dia mahalala fiteny maromaro toa ny anglisy, French, Russian, Ukrainian, Italian, Turkish ary ny hafa. Ity dia manampy amin'ny fifandraisana tsara kokoa ary manampy antsika hanome serivisy tsara indrindra ho an'ireo mpampiasa anay.
Sary 1 - Ny marika azo antoka ao amin'ny Google Chrome
Ankehitriny ianao manana hevitra marina momba izay azon'ny encryption atao amin'ny tranokalanao sy ny mpitsidika ny tranonkalanao, andao hijery azy io avy amin'ny zoro SEO.
Nahoana no maha-zava-dehibe ny mari-pahaizana SSL amin'ny SEO tranokalaninao?
Ao amin'ny Semalt, amin'ny maha-mpamatsy serivisy SEO lafo vidy sy sampandraharaham-barotra dizitaly manerantany, dia mijaly be momba ny vokatra fiarovana izahay. Ny fanomezana SSL fanamarinana atolotra dia iray amin'izy ireo, izay afaka manampy anao handroso ny SEO tranonkalanao.
Efa fantatsika ny fomba fisian'ny fahazoan-dàlana SSL / TSL ao amin'ny tranonkalanao fa mety ho boon anao. Tsy hiaro ny tranokalanao ho fiarovana azo antoka ihany izany fa hiaro ny mombamomba ireo mpampiasa anao ihany koa. Saingy mihoatra noho izany dia hanampy amin'ny ezaka fikarohana momba ny fikarohana ny SEO anao (SEO). Andeha hojerentsika ny fomba.
Mandrisika ny HTTPS i Google
Tamin'ny taona 2014, nanambara i Google fa hanomboka hijerena ny fifandraisana 'azo antoka, voaroaka ho famantarana ao anatin'ny algorithm fitadiavana azy' izy ireo. Enin-taona mahery izay no nanamafisan'i Google ny lanjan'ny fampidirana SSL / TSL, hany ka misy fiantraikany amin'ny ankamaroan'ny fangatahana fikarohana, ary indrindra ireo miantehitra amin'ny fifanakalozana ara-bola. Ireo tranokala e-mailaka, vavahadin'ny fandoavam-bola ary tambajotra sosialy dia ohatra amin'ny karazan-tranonkala mila encryption. Izany dia satria mifandraika amin'ny mombamomba ny mombamomba ny mpampiasa toy ny antsipirian'ny karatra fahazoan-dàlana, ny laharan'ny fiarovana ara-tsosialy, ary ny antsipirian'ny famantarana manokana. Ohatra, raha manana orinasa fandraharahanao manokana ianao dia tokony ho eo amin'ny lisitry ny lisitra SEO anao ny SSL.
Ireo milina fikarohana toa an'i Bing sy Yandex koa dia nanomboka nampiasa ny tranokala tranokala ho mariky ny fijoroana tsaratsara kokoa.
Milaza ny Transparency Report tamin'ny Google fa ny 88% amin'ny tranokala misy entana ao amin'ny Google Chrome eran-tany (amin'ny Windows desktop) tamin'ny Aprily 2020 dia natambatra tamin'ny HTTPS. Io isa be dia be io satria mbola manana fizarana avo indrindra (avo indrindra) amin'ny tsikera an-tranonkala ny Chrome.
Sary 2 - Ny fitomboan'ny pejy fenoina noho ny HTTPS ao amin'ny Chrome
Io tatitra io dia nilaza fa ny kaonty finday ho an'ny ankamaroan'ny lozam-pifamoivoizana tsy voamarina. Mampiseho izany fa ampy ny efitrano hanatsarana ny tranokala manodidina. Ny iray amin'izy ireo ve?
Amin'izany lafiny izany, misy mpanondro vitsivitsy avy amin'ny Google ny antony maha-zava-dehibe ny HTTPS:
Fiarovana amin'ny goavam-baravarana an-tsokosoko sy mpihaza
Misoroka ny fanafihan'ny cyber
Manatsara ny fahamarinan'ny angon-drakitra
Miasa toy ny rafitra fiarovana tsy miankina na dia mety tsy ho ampy aza ny rindrambaiko sy ny fiarovana hardware
Tranonkala iray miaraka amin'ny SSL / TSL encryption dia manome famantarana ny milina fikarohana izay mitaky amin'ny fampahalalana lehibe ny fampahalalana momba ny mpampiasa sy ny angon-drakitra. Miaraka amin'ny anton-javatra hafa toy ny votoaty mifandraika, silo votoaty, fampifandraisana anatiny, ary backlink manam-pahefana avo lenta, ny encryption dia nipoitra koa ho antony manan-danja amin'ny fanatsarana SEO.
Araka ny efa fantatrareo, ny SEO dia ny fanatsarana ny fahitana ny tranonkalanao amin'ny fikarohana organik. Miaraka amin'ny encryption dia misy dikany lehibe, azonao atao ny mametraka mari-pankasitrahana SSL fotsiny amin'ny saram-bola kely ary mivoaka avy amin'ireo habaka tsy misy tranokala tsy manana HTTPS any.
Ahoana no hanatsarana ny HTTPS amin'ny SEO?
Raha mpandoka amin'ny Internet ianao dia efa fantatrao fa tsy misy hetsika misy fiantraikany eo noho eo amin'ny SEO. Azonao atao ny manatsara ny atin'ny tranonkalanao sy sarintany isaky ny pejy isaky ny teny manokana misy. Ary ny milina fikarohana dia mbola handany fotoana hamerenana indeksana, cache ary handinihana ireo pejin-tranonkalanao ho an'ny laharam-pahamehana tsara kokoa.
Fantatra fa tsy misy na inona na inona afaka manetsika ny laharana SEO ataonao vetivety. Toy izany koa ny fanamafisana ny HTTPS ao amin'ny tranonkalanao. Tsy tokony hanantena ianao fa hanana toerana tsara kokoa amin'ny valin'ny pejy fikarohana fikarohana (SERP) amin'ny tranokalan'ny fikarohana (SERP) amin'ny tranokala, amin'ny alàlan'ny fametrahana mari-pahaizana SSL / TSL fotsiny. Rehefa miangona ny ankamaroan'ny hetsika ataonao mandritra ny fotoana maharitra, dia afaka mijinja ny tombotsoany ianao.
Figure 3 - Ity no fomba fijerin'ny tranokala tsy iray HTTPS
Ohatra lehibe ho anao izay hanome anao fanazavana mazava kokoa: izao dia diniho ny tranokala TSL encryption an'ny Semalt ary tranokala tsy misy encryption iray an'ny masoivoho mpifaninana hafa. Raha mitady lohahevitra marketing ara-nomerika mifanentana ianao, ary ireo tranonkala roa ireo dia mifaninana amin'ny toerana ambony dia ho ambony kokoa ny tranokalan'i Semalt. Nahoana?
Satria tsy manana afa-po tsara sy mifandraika amin'io lohahevitra tadiavinao io i Semalt fa manana koa ny mari-pahaizana SSL. Amin'ny fomba iray dia iray amin'ireo zavatra ampiasain'ny motera fikarohana hampitaha ireo valiny samihafa amin'ny fanontaniana iray.
Raha te hisintona ny fijanonana rehetra ianao amin'ny fanerena ny tranokalanao eo an-tampon'ny fikarohana organik, ny fametrahana mari-pahaizana SSL / TSL dia iray amin'ireo fihetsika mora indrindra. Ny hany ilainao dia ny mividy ny taratasy fanamarinana arakaraka ny zavatra takinao, ary tsara ny mandeha.
Ahoana ny fametrahana fanamarinana SSL miaraka amin'i Semalt?
Miaraka amin'i Semalt, ny fametrahana mari-pahaizana SSL amin'ny tranokalanao dia mora tahaka ny fiantsenana an-tserasera. Afaka mandeha any amin'ny pejin'ny fanamarinana SSL izahay ary misafidy amin'ny iray amin'ireo drafitra telo. Izy ireo dia:
Basic - Fametrahana irery, tsy misy fanamarinana
Fenitra - SSL tsara avy amin'ny Comodo miampy fametrahana
Premium - Saham-barotra SSL Wildcard amidy lafo indrindra amin'ny fanohanana ny subdomain sy ny fametrahana
Araka ny voalaza tetsy ambony, ny drafitr'asa Premium dia malaza amin'ny mpanjifanay efa misy. Manome azy ireo fanamorana goavambe izy ireo hahafahan'izy ireo mifantoka amin'ny asa manan-danja kokoa toy ny votoaty tranonkala sy ny fitantanana ny mpampiasa.
Vantany vao misafidy drafitra mety ianao dia manaova ny fividianana amin'ny vavahady fidirana azo antoka sy azo antoka. Vantany vao nividy azy ianao dia azonao ampidirina mora foana amin'ny tranokalanay ny serivisinao ary hampilamina ny tranokalanao. Raha sendra misy olana ianao mandritra ny dingana fanomanana, ny fikarakaran'ny mpanjifanay dia hitarika anao ary hamaly ny fanontanianao.
Ny fanamarinana SSL / TSL an'ny Semalt dia afaka manome anao zavatra dimy lehibe amin'ny dianao marketing dizitaly. Izy ireo dia:
Ny fiarovana ambony amin'ny tranokalanao
Famantarana maintso azo avy hatrany eo amin'ny Google Chrome sy ny tranonkala hafa an'ny Internet
Fiarovana tsiambaratelo ho an'ireo mpampiasa ny tranonkalanao
Ambony avo kokoa noho ny mpitsidika tranonkala organik amin'ny motera fikarohana
Araka ny nomarihan'ny mpanjifantsika taloha sy efa misy teo aloha, ny fametrahana ny mari-pahaizana SSL dia afaka manampy anao hampiditra ny tranokalanao ho vavahadin-tranonkala tsy miankina izay azon'ny mpampiasa atokisanao sy hiatrehana tsy tapaka.
Aza avela miala amin'ny tranokalanao ireo mpanjifa mety aorian'ny hijery ny mariky ny 'tsy azo antoka' ao amin'ny Google Chrome. Ento miaraka amina fanamarinana SSL Semalt izy ireo androany. Kitiho eto raha hividy iray dieny izao.